သတင်း - ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အားလုံးသောစတိုင်များ၊ ရာသီများနှင့်ဘတ်ဂျက်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးပုံး ဦး ထုပ် ၃၀ ဖြစ်သည်
အမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးသည်ဤစာမျက်နှာရှိလင့်များမှတစ်ဆင့်ကော်မရှင်များရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောထုတ်ကုန်များကိုသာပြသသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ယုံကြည်ရသနည်း။
ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ရေပုံး ဦး ထုပ်များသည်လေကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းရှိ Britney Spears ၏အထင်ကရပုံး ဦး ထုပ်မှသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းများတွင် gimmick လက်ဆောင်အဖြစ် ပို၍ သင့်လျော်သည်အထိ၊ ယခုလေယာဉ်ပြေးလမ်းတွင် (နှင့် TikTok တစ်ခုလုံးအနေဖြင့်) ရေပုံး ဦး ထုပ်များသည်ဖက်ရှင်သာမကဝတ်ဆင်ရန်လည်းပျော်စရာကောင်းသည်။ ထို့အပြင်အလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်ကမ်းခြေရှိနေမှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏နောက်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်တီရှပ်ကြည့်ခြင်းကိုစိတ် ၀ င်စားစရာပျော်စရာအသုံးအဆောင်တစ်ခုလိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ စတိုင်အားလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကသူသည်ရေပုံးထုပ်ကိုအလွန်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဂန္တ ၀ င်ဆန်သောဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေနေပါက intarsia crochet hat ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပျော်ပွဲစားနှင့် ၀ တ်စုံများနှင့်တွဲဖက်ရန်တောင်းပန်သည်။ သို့မဟုတ်ညအချိန်တွင်ထွက်ခွာသောအခါအနည်းငယ်ထောင့်တစ်စုံကို ၀ တ်ဆင်လိုလျှင် - ပုံးတစ်ထည်ကိုကြည့်ရပေမည်။ သတ္တုလမ်းကြောင်းအလုံအလောက်မရနိုင်လား။ ဒီရွှေတံငါသည် ဦး ထုပ်ကမင်းရဲ့နာမည်ကိုအော်ဟစ်နေတယ်။ ရာသီဥတုအခြေအနေအားလုံးတွင်အကွာအဝေးအပြေးသမားများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအစိုဓာတ်ထိန်းထားသောရေပုံး ဦး ထုပ်များရှိပြီး (ချွေးထွက်နေသောသဲကန္တာရအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်!) နှင့်သားရေပုံး ဦး ထုပ်များရှိသည်။
ရေပုံး ဦး ထုပ်များသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ပုံစံများဖြစ်သည်။ သင်သည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများအတွက်သေချာပေါက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သော်လည်းအကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာ၎င်းတို့အနက်အများစုသည်ဒေါ်လာ ၂၀ အောက်သာရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားဘတ်ဂျက်အတွင်းရှိမည်သည့်အဝတ်အစားကိုမဆိုပျော်ရွှင်စရာဖြည့်စွက်စေသည်။ အခုသင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးရေပုံး ဦး ထုပ်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကမင်းကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်းကိုပြုံးပြမှာပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လျှင်သင်လည်းအလားတူပြုလိမ့်မည်။
ရွေးချယ်စရာအရောင် ၃၂ ခုရှိသည်။ သင့်အပိုပစ္စည်းကက်ဘိနက်၌သင်၌အရောင်များစွာရှိပါကမအံ့သြပါနှင့်။ (သင်အပိုင်းအစနှစ်ခုဖြင့်စပါ။ သင်နှင့်သင်၏ BFF တို့သည်ချစ်စရာကောင်းသောကိုက်ညီသော selfies များယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ )
ပန်းထိုးလိပ်ပြာသည် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကိန်းအောင်းနေသော်လည်းရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကြောင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးအရာများနှင့်သင်ယှဉ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံး ဦး ထုပ်ဖြစ်သည်။ ခိုင်ခံ့ပြီးကြံ့ခိုင်သောအစွန်အဖျားသည်နေရောင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
ရိုးရှင်းသောနှင့်ဂန္ထဝင်ပုံး ဦး ထုပ်များသည်ယနေ့ခေတ်တွင်မည်သည့်ဖက်ရှင်ဗီရို၌မဆိုမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ သို့သော်သင်ဤလမ်းကြောင်းသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိမသေချာလျှင် $ 8 တန်သောဤရေပုံး ဦး ထုပ်ဖြင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သောဂန္ထဝင်ကြားနေအရောင်များနှင့်ပုံနှိပ် ၁၂ ခုနှင့်သင်၏ပုံး ဦး ထုပ်ကိုစတင်ရန် (သို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးရန်) နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီ unisex ရေပုံး ဦး ထုပ်သည်သဘာဝအတွန့်အနည်းငယ်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောသိုလှောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကို ၁၀၀% ဝါဂွမ်းနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးနွေးထွေးသောရာသီဥတုတွင်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးရှူရှိုက်နိုင်သည်။
ဒီ ဦး ထုပ်ပေါ်ကပင့်ကူက“ အိုးဒီအရာ? ကြည့်လိုက်စမ်းပါ ဦး ။ ၎င်းသည် SPF 50 ထည်ဖြင့် ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်သင်၏ ဦး ရေပြားကိုနေမှအမှန်တကယ်ကာကွယ်ပေးသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ bikini အသစ်နှင့်လုံးဝလိုက်ဖက်သည်။
Lululemon ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများသောအားကစားလုပ်ခဲ့သည့် Lulgemon ကဲ့သို့ခုခံရခက်သည့်ဤနူးညံ့သည့်နှစ်ဖက်စလုံးပုံး ဦး ထုပ်သည်အေးမြ။ တစ်မူထူးသောဘေးနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံနှိပ်ထားသောဖက်ရှင်နှစ်မျိုးပါဝင်သည့်နူးညံ့သောဒီဇိုင်းပါရှိသည်။ သူတို့၏အားကစား ၀ တ်စုံများကဲ့သို့ပင်ဤ ဦး ထုပ်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏လေးဖက်လှိုင်းနှင့်ချွေးစေးကပ်သောအထည်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုရှည်လျားသောနွေရာသီများအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
ဤအပိုင်းအစနှစ်ခုပါသောရေပုံး ဦး ထုပ်သည်လန်ဒန်၏အဓိက ၀ န်းကျင်ကိုမြင်တွေ့ရပြီး BFF နှင့်မိုးရာသီ၏ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်နေ့နှင့်ညဥ့်ပုံး ဦး ထုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ပုံနှိပ်ထားသော ဦး ထုပ်ကို ၀ တ်ဆင်လိုသော်လည်းရဲရင့်စွာကြည့်လိုလျှင်မသေချာလျှင်ဤနှစ်ဖက်စလုံးချယ်ရီ / အနက်ရောင် ဦး ထုပ်သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ချယ်ရီသီးကိုမကြိုက်ဘူးလား သငျသညျပိုမိုကြားနေအရသာရှိပါက, ဒီအဖြူရောင်အဖြူရောင်လည်စည်း - ဆိုးဆေးကြီးမြတ်လိမ့်မည်။
သငျသညျအစသူတို့ထင်ရှားပေါ်လာသည့်အခါ cheetah နှင့်မြွေအရေပြားပုံနှိပ်ခြင်း၏ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသံသယဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ငါ့ကို - နွားထီးသင်တို့ကိုဆက်ဆက်ကြီးထွားလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ TikTok OOTD ဗွီဒီယိုများတွင်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုမြင်တွေ့ရပြီးနောက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကသင်သည်ရဲရင့်သောဖက်ရှင်ကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပါက၎င်းသည်စတိုင်ကျလှသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သိလိမ့်မည်။
ဒီလက်လုပ် ဦး ထုပ်ဟာ ၁၀၀% ပိုးကတ္တီပါနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးနူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့အတွက်သင်အိပ်ချင်မှာပါ။ ၎င်းကိုသင်၏အိပ်မက်များ၏လက်လုပ်တံငါသည် ဦး ထုပ်အဖြစ်စဉ်းစားပါ။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ရေပုံး ဦး ထုပ်တစ်မျိုးမျိုးဟာ unisex ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလူကြိုက်များတဲ့ ဦး ထုပ်ဟာကြားနေအရောင်တွေနဲ့ဂန္ထဝင် Adidas လိုဂိုကိုအသုံးပြုပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့စတိုင်လ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အားကစား၊ ခံစားမှု။
ဒါကနည်းနည်းလေးသေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ပိုကြီးအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ (ပြီးတော့သင့်လက်တွဲဖော်ကမင်းဆီကဒါကိုခိုးယူလို့နောက်ထပ်တစ်ခုယူပါ။ )
ဒီနောက်ပြန်လှည့် ဦး ထုပ်သည်အပြင်ဘက်တွင်အပူဆုံးနေ့များအတွက်ဒီဇိုင်းသည်ပေါ့ပါး။ အကြမ်းခံ။ ရေစိုခံသည်။ ၂ လက်မအကျယ်ရှိသောအနားကွပ်သည်သင်၏ ဦး ခေါင်းနှင့်လည်ပင်းကိုနေရောင်ခြည်မှကာကွယ်နိုင်သည် (သို့သော်နေရောင်ကာကွယ်ဆေးသုံးစွဲရန်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနှင့်) ။
ဒီအတုနောက်ခံထည်သည်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်သာမကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဖက်ရှင်လည်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရောင်များနှင့်ပုံစံများကိုမကြိုးစားရသေးပါက၎င်းသည်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာဖက်ရှင်သတင်းအချက်အလက်ဂီယာ၏အစွမ်းထက်ပုံစံဖြစ်နိုင်ကြောင်းလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤ“ Cross To Colours” ပတ္တမြားသည်“ လူများကိုပါဝါသို့” ပန်းထိုးခြင်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးအပိုင်းကဒီ ဦး ထုပ်ကိုဝယ်ခြင်းအားဖြင့်မင်းကလူမည်းလူငယ်တွေကိုအခြေခံပြီးဖက်ရှင်စျေးကွက်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ကူညီပေးတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုထောက်ပံ့နေတယ်။
သင်၏မဟာမိတ်များနှင့်ဂုဏ်ယူ ၀ မ်းသာမှုကိုပြသပါ။ ဤပြိုင်ပွဲမှသင်၏ virtual ပါတီအထိဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မျက်လုံး (သို့မဟုတ်လေး) ကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအပိုင်းအစကသင့် Insta ဇယားကွက်ပေါ်ကနေရာတစ်ခုကိုတောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဆီးနှင်းပုံး ဦး ထုပ်အပေါ်သင်၏မေတ္တာကိုဆီးတားနိုင်လျှင်ဆီးနှင်းသည်ဤအရာသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ Faux သားမွေးများသည်အလွန်လူကြိုက်များလာသည်။ သို့သော်၎င်း၏နီယွန်အရောင်က၎င်းကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစေသည်။
ဖက်ရှင်အားကစားနှင့်အပန်းဖြေမှုမြင့်တက်လာခြင်းဖြင့် Nike သည်ဖက်ရှင်ကျဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သူတို့ရဲ့အထင်ကရအမှတ်အသားကိုရေပုံး ဦး ထုပ်၊ ဂန္ထဝင်ထောင်စုနှစ်ပန်းရောင်နှင့်လည်ချောင်းဆေးဆိုးများကိုပေါင်းစပ်ပါ။
အပိုဆု - ၎င်းသည်အတွင်း၌အေးမြသောချွေးစည်းများရှိပြီးလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်နွေရာသီအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
မဟုတ်ဘူး၊ ဂျင်းဘောင်းဘီဟာဘောင်းဘီအတွက်လိုအပ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ ဦး ထုပ်ကိုတကယ်တော့ ၁၀၀% ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဒါကြောင့်လုံးဝရှူရှိုက်နိုင်ပြီးဝတ်ဆင်ထားသောဒီဇိုင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသော၊
သင်အင်္ကျီ - ဆိုးဆေးချွေးထွက်အင်္ကျီ၊ အ ၀ တ်များနှင့်အားကစားဘရာစီယာများကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဖြည့်စွက်ရန်သင်လိုအပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံပုံနှိပ်အဝတ်အစားနှင့်ကိုက်ညီရန်ခက်ခဲသော်လည်းဤထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံး၏ကြားနေအရောင်သည်ဖြူစင်သောသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ပုံး ဦး ထုပ်ကဲ့သို့စွယ်စုံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
အိုကေကောင်းပြီဒါဒါပုံးတစ်ပုံးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် Amazon ရဲ့အရောင်းရဆုံး Hairbrella ကတော့ ဦး ထုပ်စာရင်းထဲမှာနေရာတစ်ခုရထိုက်တယ်။ သင့်ရဲ့ဆံပင်ကိုအစိုဓာတ်နှင့်မိုးရာသီမှကာကွယ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ရာသီဥတုကသင့်ဆံပင်ကိုဘယ်တော့မှမပျက်စီးစေနိုင်ပါ။
ဦး ခေါင်းမှသည်ခြေချောင်းများမှသားရေသည်အမြဲတမ်းကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်ပြီး၊ ယခုတွင်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အနိမ့်အကျယ်ကိုလည်းကြောင့်အသက်ရှူစေ။
သင်သည်သင်၏ဆံပင်ပုံစံအပြည့်အစုံကိုပြချင်သည်ဖြစ်စေ၊ အများဆုံးရှူရှိုက်နိုင်သောပုံးတစ်ပုံးကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေဤပွင့်လင်းသောပန်းပုံး ဦး ထုပ်သည်အလွန်ချစ်စရာကောင်းသည်။ သင့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလျှော့ချစရာမလိုဘဲသင်၏အဝတ်အစားကို (စာသားအရ) အလင်းပုံစံကိုထည့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရေပုံး ဦး ထုပ်အားလုံးသည် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုပါကအရောင်အသွေးစုံလင်လှသောပုံး ဦး ထုပ်သည်အလွန်ဖက်ရှင်ကျပြီးသင်၏နောက်ကမ်းခြေမီးပုံသင့်သည်။
ဒီရေပုံး ဦး ထုပ်ဟာဇာထိုးဖြစ်ပြီးပျော့ပျောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ ပန်းခြံ၌ချိန်းတွေ့သည့်အခါ Daphne Bridgerton ဝတ်ဆင်မည့်ပုံစံနှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော်ဂျင်းဘောင်းဘီများ၊ အကျီင်္များနှင့်တီရှပ်များလည်းကွဲနေသည်။ ဒါဟာအရက်မူးမနက်လည်စာမှာနည်းတူကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ဒီဟာနည်းနည်းစျေးကြီးတယ် သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ညအချိန်တွင်တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်ညနေခင်း၌ဆန်းကြယ်သောအသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ဤအရာသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ rivets နှင့်အတုသားရေအထည်များအကြား, ကမည်သည့်အဝတ်အစားမှတောက်ပထည့်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအရည်အသွေးမြင့် floppy နေရောင် ဦး ထုပ်ကိုကြိုက်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ခိုင်မာသောခံစားမှု (နှင့်သူတို့အားလပ်ရက်အပေါ်ထုပ်ပိုးရန်မည်မျှခက်ခဲ!) ကိုမုန်းလျှင်, ဒီ floppy နေရောင် ဦး ထုပ်များနှင့်ပုံး ဦး ထုပ်၏မျိုးစပ်သင့်ရဲ့ကမ်းခြေခရီးသွားဆုတောင်းပဌနာ၏အဖြေဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းသည်အပိုကျယ်ပြန့်သောအနားများရှိပြီး၎င်းကိုခရီးသွားခြင်းအတွက်ကမ်းခြေထီးကဲ့သို့ပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင် 100% ဝါဂွမ်းထည်ကပိုမိုရှူရှိုက်မိစေသည်။
သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာခရီးသွားစဉ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းစသည်တို့အတွင်းသင်ဝတ်ဆင်နိုင်သောအရည်အသွေးမြင့်ရှိသင့်သည့်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက Sweety Betty ၏အရည်အသွေးမြင့်အထည်များသည်သင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ သင်ဗီရိုအတွင်းရှိအနက်ရောင်အရောင်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းသည်နက်ပြာရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
ဒီဟာက“ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်” လို့မအော်ရင်၊ ဒါကဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ ဤ ဦး ထုပ်သည်သင်၏ Insta ပရိတ်သတ်များနှင့် BFF တို့၏စိတ်အားထက်သန်သောတုန့်ပြန်မှုကိုနှိုးဆွပေးပြီးဒီ ဦး ထုပ်သည်မည်သည့်အဝတ်အစားကိုမဆိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်သိမ်မွေ့သောအရွယ်အစားညှိနှိုင်းမှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေနိုင်သည် (မျှတသောသတိပေးချက် - သင့်ကိုငှားရန်တောင်းပန်ပါလိမ့်မည်)
သို့တိုင်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုအတွင်း၌စတိုင်ကျသောသတ္တုပုံစံရလိုပါသလား။ ဒီရေပုံး ဦး ထုပ်ကဒေါ်လာ ၂၀ အောက်ပါ။ ဤစျေးနှုန်းဖြင့်သင်၏ရွှေနှင့်ရွှေကိုလိုချင်သည်။ သင့်ရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်တီရှပ်အကြည့်ကိုထွန်းလင်းရန်သို့မဟုတ်ညအချိန်တွင်လှပသောဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်တွဲဖက်ပြီးထွက်သွားပါ။